Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်)
Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Zithromax® သည် ဘတ်တီးရီးယားများကို တိုက်ခိုက်သော ပဋိဇီဝဆေး တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ Zithromax® ကို ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါပိုးကူးစက်မှု အမျိုးမျိုးကို ကုသရန်အတွက် သုံးသည်။ ဥပမာ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ရောဂါပိုးကူးစက်မှု၊ အရေပြား ရောဂါပိုး ကူးစက်မှု၊ နား ရောဂါပိုးကူးစက်မှု နှင့် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ ဖြစ်သည်။
Zithromax® ကို ဆေးလမ်းညွှန်တွင် ဖော်ပြမထားသော ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်လည်း သုံးနိုင်သည်။
Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Zithromax® ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း တိကျစွာ သောက်ပါ။ ဆေးညွှန်းတွင်ပါသော လမ်းညွှန်ချက် အားလုံးကို လိုက်နာပါ။ ဤဆေးကို သတ်မှတ်ထားသည်ထက် ပိုများစွာ၊ ပိုနည်းစွာ သို့မဟုတ် ပို၍ ကြာရှည်စွာ မသောက်ပါနှင့်။ azithromycin ကုသမှု၏ ပမာဏနှင့် ကြာချိန်သည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတိုင်းတွင် မတူညီနိုင်ပါ။
Zithromax® ကို အစာဖြင့် သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။
သင်သည် ဆေးပမာဏကို မချိန်တွယ်ခင် ဆေးရည်ကို ကောင်းစွာ လှုပ်ပါ။ ပေးထားသော ဆေးပမာဏ ချိန်သည့် ပြွန်၊ ဇွန်း သို့မဟုတ် ခွက်ဖြင့် ဆေးရည်ကို ချိန်ပါ။ သင့်တွင် ဆေးချိန် သော ကိရိယာမရှိပါက ဆေးရောင်းသူထံမှ တစ်ခုတောင်းယူပါ။
ဤဆေးကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အထိ အပြည့် သောက်ပါ။ သင်၏ လက္ခဏာများသည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှု လုံးဝ မပျောက်ခင် သက်သာလာနိုင်သည်။ ဆေးကို ပုံမှန် မသောက်ပါက နောက်ထပ် ကူးစက်မှု ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ် ကူးစက်မှုသည် ပဋိဇီဝဆေးကို ခံနိုင်လာသည်။ Zithromax သည် ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုများ ဥပမာ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိခြင်းကို မကုသနိုင်ပါ။
Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Zithromax® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Zithromax® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ Zithromax® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Zithromax® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Zithromax® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
သင်သည် အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပါက Zithromax® ကို မသုံးသင့်ပါ။
သင်သည် Zithromax သောက်ခြင်းကြောင့် အသားဝါခြင်း သို့မဟုတ် အသည်း ပြဿနာများ ဖြစ်ဖူးပါက
သင်သည် အလားတူ ဆေးများ ဥပမာ clarithromycin, erythromycin, သို့မဟုတ် telithromycin နှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Zithromax® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Zithromax® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ Zithromax® သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်။
Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သင်သည် Zithromax® နှင့် ဓါတ်မတည့်သော လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်ပါက အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အကူအညီ ရယူပါ။ ဥပမာ အင်ပျဉ်၊ အသက်ရှူရ ခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း။
အချို့ ရှားပါးသော ဖြစ်စဉ်များတွင် azithromycin သည် ပြင်းထန်သော အရေပြား တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ခန္ဓါကိုယ်၏ အခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါက သေစေနိုင်သည်။ သင်သည် အဖျားတက်ပြီး အရေပြား အဖုအပိမ့်များ ထွက်လာပါက၊ ပိုဆိုးလာပါက၊ ဂလန်းများ ရောင်ခြင်း၊ တုပ်ကွေး လက္ခဏာများ၊ ပြင်းထန်သော ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် ထုံကျဉ်ခြင်း စသည်တို့ ခံစားရပါက ကျန်းမာရေး ကုသမှု ရယူပါ။
ပြင်းထန်သော အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း ( အရည်ကျဲကျဲ သို့မဟုတ် သွေးပါသော)
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ မူးဝေခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်သံ မြန်ခြင်း၊ တဒိန်းဒိန်း မြည်ခြင်း
အသည်း ပြဿနာများ – မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အစာအိမ် အပေါ်ပိုင်း အောင့်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ အစာ စားချင်စိတ် မရှိခြင်း၊ ဆီးအရောင် မည်းခြင်း၊ ဝမ်းအရောင် ဖျော့ခြင်း၊ jaundice ( အရေပြား သို့မဟုတ် မျက်လုံး ဝါခြင်း)
ပြင်းထန်သော အရေပြား တုံ့ပြန်မှု – အဖျားတက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာ သို့မဟုတ် လျှာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မျက်လုံး ပူခြင်း၊ အရေပြား နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဝက်ခြံတွင် ပြည်များ ပြည့်နေခြင်း၊ အနီရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင် အရေပြား အဖုများ ( အထူးသဖြင့် မျက်နှာ နှင့် ခန္ဓါကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတွင်) ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အရေပြား ဖောင်းကြွပြီး အလွှာလိုက် ကွာကျသည်။
Zithromax® သောက်နေသော ကလေးသည် စိတ်တိုလွယ်လာပါက သို့မဟုတ် စားနေစဉ် အော့အန်ပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
လူကြီးများတွင် နှလုံးခုန်သံ စည်းချက်အပေါ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသော နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ခြင်း ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ် အောင့်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zithromax® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
သွေးကျဲဆေး – warfarin, Coumadin, Jantoven
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Zithromax® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zithromax® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
နှလုံးခုန်သံ စည်းချက် ရောဂါ
QT ရှည်သော ရောဂါ ရာဇဝင်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Zithromax® ဆေးရည် ( 1g တစ်ခါသောက် အထုပ်) ကို ဖျော်ပြီးနောက် အစာဖြင့် သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဆေးပြားများကို အစာဖြင့် သောက်ပါက ဆေးယဉ်ပါးမှု ပိုဖြစ်စေသည်ကို တွေ့ရသည်။
Zithromax ဆေးရည် ( 1g တစ်ခါသောက် အထုပ်) ကို ကလေးများတွင် မသုံးရပါ။ ကလေး ဆေးရည်အတွက် Zithromax® ( azithromycin ဆေးရည်) 100 mg/5mL နှင့် 200 mg/5mL ဆေးဘူးများ၏ ဆေးညွှန်းကို ဖတ်ပါ။
Gonococcus ကြောင့်မဟုတ်သော ဆီးထုတ်ပြွန် ရောင်ခြင်း၊ C. trachomatis ကြောင့် ဖြစ်သော သားအိမ်ခေါင်းရောင်ခြင်း၏ ကုသမှုအတွက် ထောက်ခံထားသော Zithromax® ပမာဏမှာ 1 gram (1000 mg) တစ်ခါသောက် ဖြစ်သည်။ ဤပမာဏကို တစ်ခါသောက် အထုပ် (1g) ဖြင့် ပေးနိုင်သည်။
disseminated MAC ကူးစက်မှုများအား ကာကွယ်ရန်။ disseminated Mycobacterium avium complex (MAC) ရောဂါကို ကာကွယ်ရန် ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ 1200 mg တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် ဖြစ်သည်။ ဤပမာဏကို သတ်မှတ်ထားသော rifabutin ဆေးညွှန်းနှင့် ပေါင်းပေးနိုင်သည်။
Disseminated MAC ကူးစက်မှုများအား ကုသရန်။ Zithromax® ကို နေ့စဉ် 600 mg သောက်သင့်သည်။ ethambutol 15 mg/kg နေ့စဉ် ပမာဏဖြင့် ပေါင်းပေးသင့်သည်။ Mycobacteria ကိုနိုင်သော အခြားဆေးများကို ဆရာဝန်၏ ဆုံးဖြတ်မှုနှင့်အတူ azithromycin အပေါင်း ethambutol ဆေးညွှန်းတွင် ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Zithromax (ဇင်သရိုမက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Zithromax® ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
အလွှာပါး အုပ်ထားသော ဆေးပြား၊ ဆေးရည်။ azithromycin dehydrate 600 mg
Zithromax® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Zithromax®. https://www.drugs.com/zithromax.html. Accessed August 7, 2017
Zithromax®. http://www.medbroadcast.com/drug/getdrug/zithromax. Accessed August 7, 2017
ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ကျန်းမာစေဖို့ ဒါတွေကိုလုပ်ပေးပါ
လည်ချောင်းနာခြင်း ။ ။ ကလေးဟာ ပဋိဇီဝဆေးတွေ သောက်ဖို့ လိုနေသလား